Hebei Runfeng cryogenic midziyo Co., Ltd.ibhizimusi idzva repamusoro-soro rinogadzira dhizaini, kugadzira uye kutsvagisa yakadzika-tembiricha yekumanikidza midziyo. Zvigadzirwa zvinotungamira zvekambani ndezvepasi-tembiricha inowedzeredza mabhodhoro akaomeswa, matangi ekuchengetera-kudzikira, D1, D2 yekumanikidza ngarava nezvimwe zvigadzirwa. Kuburitswa kwegore rino kwemabhodhoro akadzika-tembiricha anodarika mazana mana mazana mana, uye ematangi ekuchengetera anopfuura 2000. Iyo kambani ine hombe-diki hydraulic swing ndiro inokotama muchina, yakazara otomatiki manhamba ekudzora mana roller ndiro yekukotama muchina, otomatiki kuwanda kudzora longitudinal seam . Iyo kambani ine vanopfuura vashandi ve200, kusanganisira vanhu vanopfuura makumi mashanu vane degree rekoreji kana pamusoro, vanhu vanopfuura makumi matatu vane bachelor degree kana pamusoro, vanopfuura makumi maviri tekinoroji uye mainjiniya, vane simba rehunyanzvi uye hwakakwana mhando vimbiso system. Iyo kambani inodyara yakawanda yakawanda mari gore rega rega mukuvandudza uye kuyedza kwehunyanzvi hutsva uye zvigadzirwa zvitsva. Shingairira kugadzira bhizinesi rakajairika mune yakadzika tembiricha indasitiri.
1983 Runfeng Enterprise yakavambwa
Runfengfeng Enterprise yakavambwa muna 1983. Kubva payakatanga, yakasimbisa makambani mana akateedzana kuitira kuti ivake simba rakasimba kwazvo rekushandira indasitiri yazvino, uye kusimudzira zvakatsiga uye kutsunga kugadzira. Iwo ari Runfeng Mechanical uye Magetsi, Runfeng Mashini, Runfeng Container uye Runfeng Commerce Concrete vakaisa hwaro hwaro hwekuzadzisa chinangwa chekuvaka kambani.
2004 Runfeng Electromechanical yakanyoreswa uye kusimbiswa
Runfeng Electromechanical yakanyoreswa uye yakagadzwa muna 2004. Bhizinesi hofisi chivakwa chiri zviuru zvisere zvemamirimita uye imba yekuchengetera ndeye zviuru makumi maviri zvemamirimita. Iyo kambani inonyanya kufunga nezvekushambadzira kwemagetsi pamwe nekutengesa, mafeni, pombi dzemvura, zvishandiso zvehardware, uye otomatiki magetsi ekuparadzira masystem. Uye simbisa kwenguva refu kudyidzana kudyidzana neanozivikanwa epamba vagadziri.
2005 Runfeng Machinery yakanyoreswa uye kusimbiswa
Runfeng Machinery yakagadzwa muna 2005 kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nekugadzira uye kuisa yakakwira uye yakaderera magetsi magetsi ekuparadzira makabati, mabhokisi-mhando zvigadziriso, maficha ekudziisa, masisitimu ekupa mvura, michina yekusimudza, zvisimudziso zvezvinhu, uye zvigadzirwa zvakagadzirwa.
2012 Runfeng cryogenic michina yakavambwa
Runfeng cryogenic michina yakavambwa muna 2012. Iyo kambani inogadzira dhizaini nekugadzira yemidziyo yekumanikidza, matangi ekuchengetera, gasi masirinda, akazara seti yemidziyo yegasi gasi, maindasitiri gasi michina, marasha-ku-gasi magetsi masisitimu, akagadzirwa asiri- midziyo yakajairwa, nemidziyo yepamusoro-chaiyo.
2012 Runfeng Commercial Concrete yakavambwa
Runfeng Commercial Concrete yakavambwa muna 2012. Iyo kambani ine maviri nemakumi maviri neshanu mitsara yekugadzira neyegore kuburitsa kwemamirioni matatu emamitha cubic metres ekutengesa kongiri. Iyo kambani inotsigira akawanda masanganisi marori uye makumi mana emamita pombi marori.
Runfeng Service Chinangwa
Runfeng ine vashandi vanopfuura mazana matatu, mainjiniya makumi mana neimwe, uye vanopfuura makumi manomwe vatengesi. Pasi pehutungamiriri hweRunfeng vanhu, kubva kune imwechete yepakutanga kupedzisa michina, kubva pakuronga kuronga kuenda ku-saiti kumisikidza uye kuvaka, kubva pane yekutengesa ruzivo ruzivo kune yakazara mushure-yekutengesa sevhisi, vanhu veRunfeng vanoomerera pakushanda mamwe mabhizinesi ekuti vazive zviroto zveChinese kunge zvavo basa.